GAROOWE, Puntland - Gollaha Wasiiradda dowladda Puntland, ayaa maanta isugu yimaadey kulan deg deg ah, kaasi oo lagu qabtey aqalka madaxtooyadda Garoowe.
Ujeedka shirkaan ayaa ah in looga hadlo xaalada deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, halkaasoo baryihii dambe ay ka jirto colaad u dhaxeysay Puntland iyo Somaliland, taasi oo dib usoo qaraxday 15-kii bishan.
Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali [Gaas] ayaa shir gudoominaya kulanka aan caadiga ahayn, waxaana la filayaa in laga soo saaro go’aano culus oo ku qotomo xiisadda ka taagan deegaanka Tukaraq.
Maalmo ka hor, Madaxweyne Gaas ayaa si cad u sheegay in maamulkiisa uusan u dulqaadan doonin wax uu ku sheegay weerarka gar-daradda ah ee maamulka Hargeysa kusoo qaaday dhulka Puntland, isagoona ku dhawaaqay inuu sii socon dooono dagaalka.
Xaaladda deegaanka Tukaraq ayaa waxay hadda tahay mid degan, inkastoo aanan la ogayn waxa dhici kara saacadaha soo aadan, maadaama la sheegayo in labada dhinac ay wadaan abaabul dagaal iyo isku ciidan uruusasho.
Labadda maamul ayaa waxaa la tilmaamayaa inay Jiida hore ee dagaalka ay kusoo daabulayeen saacadihii u dambeeyay ciidamo cusub iyo gaadiidka dagaalka, taasoo sare usii qaadeysa cabsiga laga qabo dagaal dib uga qarxa deegaanka Tukaraq.
Tani waxay ka dhigan tahay in labadda maamul [Puntland iyo Somaliland] ay ka dhaga fureysteen baaqyadda nabadeed oo ay usoo jeedinayaa madaxda dowlada Federaalka, beesha caalamka iyo wax-garadka qeybahiisa kala duwan.
Puntland oo u diyaar garoobeysa dagaal ka dhan ah Somaliland
Puntland 19.05.2018. 14:26